Kukiyada waa files in ay ku kaydsan yihiin computer marka website la heli si aad u hubiso in user helo waayo-aragnimo ugu fiican ee la xiriirta page in la booqday. Waxaa sidoo kale in la xuso in cookies ka samatabbixin waayo-aragnimo sida faylasha waxaa lagu badbaadiyey gal nidaamka iyo sabab la mid ah server ama nidaamyada fog heli nuxurka iyo taariikhda dhirta eee nidaamka. Kukiyada waa files caan ku ahaa labada telefoonada gacanta iyo sidoo kale desktops iyo tutorial tani waa dhan oo ku saabsan cookies ku iPhone iyo saarista si loo hubiyo in dhirta waa aamin oo xasiloon.
Maxaa ka dhigay cookies on iPhone?
Waxaa jira dhowr sababood oo aad u hubiso in cookies waxaa abuuray oo ku kaydsan yihiin gal nidaamka. Ka dib markii qaar ka mid ah sababaha la xidhiidha fikradda:
Waa arrin ugu badan taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah waayo-aragnimo tahay gal internet-ka. Si aad taasi u dhici kartaa ku dhowaad dhammaan internetka ee adduunka hubiyo in cookies waxaa lagu badbaadiyey gal qalabka in browses ay website sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in uu Author taariikhda waxaa la tirtiro si loo hubiyo in arrinta cookies la xalin dib dhirta uu dhammaado.
On hal gacan websites waa inuu xaqiijiyo in cookies waxaa abuuray gal nidaamka laakiin waa in la ogaadaa in dhamaan websites ma la mid yihiin oo sidaas daraaddeed siyaasadda ee maamula ay xeerka iyo nidaamka ay tahay hawsha ugu muhiimsan taas oo ka dhigaysa hubiyo in cookie ah in waa in la abuurin ama. Waxaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka ka mid tahay abuurista cookies si loo hubiyo in user helo content ee waafaqsan shuruudaha iyo weliba hubinayaa in content ee soo xulatay la soo bandhigay waxaa browsed.
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha ogolaada in qalabka iyo sidoo kale website-ka si ay u abuuraan cookies gal nidaamka iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa inay u sahashaa ama gab ah cookies si gaarka ah ee waa laga badbaadin karaa. Waxaa la soo sheegay in ay sabab u tahay xaqiiqada ah in ee la soo dhaafay factor cookie ayaa keeni badan oo muran iyo sabab ka mid ah dadka isticmaala badan yihiin walaacsan fikrad marka ay timaado cookies. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in aad u hesho Casharrada online si loo hubiyo in Safari ah taas oo ah browser ugu weyn ee iPhone loo qaybiyay si loo hubiyo in cookies waxaa marnaba abuuray.
Si aad u hubiso in user helo waayo-aragnimo ugu wanaagsan ee la wadaago macluumaadka sidoo kale waa fikrad taas oo horseedaysa abuurka cookie ku gal website-ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in fikrad waxa sidoo kale mararka qaarkood loo adeegsadaa si loo hubiyo in ammaanka dalkiisa iyo sidoo kale fikradda guud ee difaaca la ilaaliyo iyo halkan waxa kale oo loo isticmaalaa ciidamada iyo sidoo kale sirdoonka si ula kac ah si ay u hubiyaan in danaha qaranka waa in la dhowraa in arrintan la xiriira.
1 click in ay nadiifiso cookies aad iPhone
Wondershare SafeEraser waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican si loo hubiyo in cookies ama wixii macluumaad kale in user ay u baahan tahay waa la tirtiray si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee gaarka ah fanka la siiyo iyo sidoo kale ilaaliyo waqti isku mid ah. Waxaa jiro liis dheer oo ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee barnaamijka oo soo socda waa qaar ka mid ah qodobada ku jira in la tixgeliyo ee la xiriira barnaamijka waxa ka hooseeya su'aasha.
Ka dib markii qaar ka mid ah qodobada ay kaas oo muujinaya in sida waxtar leh barnaamijkan waa sida ay sidoo kale hubineysaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ee:
The files tirtiray aan si joogto ah la tirtiro sida ay waxay yihiin haddii ay hab dhaqameed waxaa loo isticmaalaa. Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in files waxaa tirtiray mar oo dhan.
Haddii user uu doonayo inuu iska iibiyo, deeqdo ama kaliya ka tanaasulaan qalabka jirkaan ayaa markaasi ka barnaamijkani waxa uu caawiya si loo hubiyo in qalabka si joogto ah la tirtiro iyada oo raad lahayn record jir
Kukiyada iyo tirtirka xogta gaarka ah sidoo kale waa arrin horay loo gundhig gudahood barnaamijka si loo hubiyo in xogta gaarka ah iyo sharafta waxaa had iyo jeer la ilaaliyo.
Files junk ayaa sidoo kale u dhigi iPhone iyo barnaamijkan waa inuu xaqiijiyo in files waxaa tirtiray iyo waayo-aragnimo ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u isticmaala.
Sida loo isticmaalo SafeEraser Wondershare in ay nadiifiso cookies on iPhone
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si loo hubiyo in user helo waayo-aragnimo ugu fiican:
1. Download oo ay maamulaan barnaamijka on your computer hore. Screen ugu weyn ee arbushin doonaa oo kaliya marka qalabka la aqoonsan yahay in la soo xiran nidaamka:
2.Beerta masixi button xogta gaarka loo leeyahay waa ka dibna in la sii adkeeyey si aad u hubiso in user helo iskaanka qalabka iyo suuqa kala socda booda:
Qalab 3.Beerta ka dibna waxaa falanqeynaya iyo user ku arki kartaa dhammaan faylasha, fayl iyo cookies soo bandhigay:
4.The user markaas u baahan yahay in la hubiyo in diiwaanka taas oo u baahan tirtirka la doorto iyo habka horumarka marka masixi hadda button la isku soo riixayo,
5.The hadalka tirtirto waa in la qoraa makiinad iyo masixi hadda button waa in la sii adkeeyey in la sii wado,
6.The user markaas arki doonaa suuqa kala waafaqsan in xogta si joogto ah ayaa la tirtiray:
> Resource > Clean-up > Sida loo Cad Kukiyada on iPhone